Asa tanana: misedra olana ny mpanao valiha | NewsMada
Asa tanana: misedra olana ny mpanao valiha
Olona roa ihany ny mitondra tsy tapaka ny « bambou » na ny volobe fanaovana valiha eto an-dRenivohitra. Na mbola tsy maro mpitady loatra aza ito zavamaneno malagasy ito, efa tsapan’ny ankamaroan’ny mpandrafitra valiha fa tsy maharaka ny filan-dry zareo ny tolotra avy any amin’ireo mpamatsy « bambou ». « Tsy tonga amin’ny fotoana mahamaro ny mpanjifa izy ireny, hany ka voatery mihantona maharitraritra ny famaliana ny filan’ny mpampiasa sy mpividy valiha », hoy ny mpandrafitra valiha iray.
Anisan’ny olana iray mahatonga izany ny fakàna ireny “bamboo” na volobe ireny. Tany ambadiky ny 20 taona tany ho any, mbola tsy lasa lavitra ny toerana anirian’ny volobe. Ankehitriny, efa tafiditra anaty ala somary lavitry ny tanana vao mahita, raha ny fanazavan’ireo mpaka volobe. Ankoatra izay, manomboka sarotsarotra ihany koa ny mahita ireo volobe lava sy ranjanana. Somary mihena kokoa, raha oharina tany ambadiky ny 15 taona lasa, ny kalitaon’ny volobe fanaovana valiha.
Nambaran’ireo mpanao asa tanana anefa fa « na izany aza ny olana mianjady amin’ny mpanao valiha, miezaka ny hitana ny hatsaran’ny valiha malagasy hatrany izahay satria anisan’ny zavakanto mampiavaka an’i Madagasikara sy ny Malagasy amin’ny hafa izy io sy ny zava-bita aminy ».
Anisan’ny mampitombo tsikelikely ny fitadiavan’ny olona ny valiha kosa ny fiverenan’ny Malagasy tsikelikely amin’ny fitiavana ny kolontsainy. Raha ry zareo vahiny no mpividy valiha Malagasy, 5 taona lasa izay, manomboka mitady io zavamaneno io ihany koa ny Malagasy ankehitriny.